Dad ku dhintay dooni ku qalibantay xeebaha dalka Tansaaniya – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDad ku dhintay dooni ku qalibantay xeebaha dalka Tansaaniya
21/09/2018 Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Ugu yaraan 44 Qof ayaa ku dhimatay, tiro intaa ka badanna waa lagu la’yahay markii ay Dooni rakaab sidday ku rogmatay Harada Lake Victoria, ee Dalka Tansaaniya , sida ay xaqijiyeen Saraakiisha degaankaas.
Shilkan ayaa dhacay Maqribnimadii Xalay, waxaana la filayaa inuu qasaaraha bato, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka oo illaa iyo Maanta ku guda jira howlaha baarista meydadka Dadkii halkaasi ku dhintay.
Guddoomiyaha Gobolka Harada Fiktooriya, John Mongella, ayaa Wakaaladda wararka ee AP u sheegay in 37 Qof la badbaadiyay Xalay, qaar badan oo ka mid ah Dadkaasina ay xaaladdoodu liidato.
Doonida MV Nyerere, oo ku qallibantay meel ku dhow Jasiiradda Ukara Island, ayaanan la ogeyn tirada dhabta ah ee saarnayd, maaddaama diiwaan geliyahii rakaabka laftiisa uu ku jiro Dadka shilkaasi ku geeriyooday.
Qiyaas ay Saraakiisha Dowladda Tansaaniya samaysay ayaa lagu sheegay in shilkaas uu sababaty tirada rakaabka oo aad ugu badnayd inta loogu tala galay, iyagoo tilmaamay inay Dadku ahaayeen tiro u dhexeysa 400 illaa 500 oo Qof.